I-battery 7 yebheja yebheja yexabiso elifanelekileyo China Manufacturer
Inkcazo:Ibhetri ye-iphone ifumana ifoto,I-iphone ibhetri ukukhanya okuluhlaza,Iphone Ukulahlekelwa Ukukhawuleza Ngokukhawuleza
Home > Imveliso > Ibhetri ye-iPhone > IPhone 7 Ibhetri > I-battery 7 yebheja yebheja yexabiso elifanelekileyo
I- iphone 7 yokutshintshwa kwebhetri, umthamo ngowama-1960 mAh, ubukhulu kunye nomthamo kufana neyokuqala. Siphinde sibe namandla angama-2200 mAh, emva kokusebenzisa le bhetri impilo yebhetri ye- iphone inganda i- 15% ubuncinane. Iseli yebhetri sisebenzisa i-li-polymer ecocekileyo yento ye-cobalt, ihlala ikhuselekile kwaye ikhuselekile. Nge-TI chip, ayinakuchaphazela emva kokuhlaziya. I-battery ye-HQQN ye- iphone yinto ekhethekileyo yokukhetha inxeba emva kokuthengiswa kweenkonzo kunye neyona ndawo.
Ibhetri ye-iphone ifumana ifoto I-iphone ibhetri ukukhanya okuluhlaza Iphone Ukulahlekelwa Ukukhawuleza Ngokukhawuleza Ibhetri ye-iphone kufutshane nam Ibhethri ye-iphone igcina ukuCoca Ibhethri ye-iphone ayigcinekiyo Ibhetri ye-Iphone 6 S Ibhetri ye-Iphone SE yoqobo